Kunakidzwa, kutora mifananidzo uye kugadzirwa, kwanhasi zvibvumirano paApp Store | IPhone nhau
Kupera kwevhiki kunotanga uye nekudaro, inguva yakanaka kurodha pasi mamwe mitambo mitsva nemaapp pane yedu iPhone nePadad uye tiva nenguva yakanaka yekunakidzwa.
Ino nguva tinokuunzira zvishoma zvezvose: nzvimbo ine nzvimbo uye inoonekwa karenda, inoshamisa app yaunogona kuburitsa kugona kwako, uye yepakutanga uye inonakidza mutambo. Uye pamusoro pazvo zvese Ukakurumidza, unogona kutora mukana wekupihwas.
1 Vantage Karenda
2 DhizainiLab Studio
3 Speedball 2 Shanduko
Isu tinotanga neichi chishandiso kuti, sezvo iwe ungatogona kufungidzira, iri karenda app iyo yakave ichangobva kuvandudzwa yeIOS 11 uye inozvitsanangura se "nyore uye yakapusa". Chakavanzika chayo ndechekuti ive yakagadzirirwa kuve yakazara customizable nemushandisi uye inoonekwa zvakanyanya. Mafonti akasiyanasiyana, mavara, tsvimbo ers zvinokubatsira iwe kuratidza iwo makotesheni ayo anonyanya kukoshesa kwauri uye kuvaona kekutanga, pamwe nekuwana maonero akanaka ezve zvichauya.
Uyewo, inosangana neese iOS inowirirana karenda seGoogle Calendar, iCloud, Outlook, nezvimwe.
"Vantage Calendar" ine mutengo wenguva dzose we € 4,49 asi ikozvino unogona kuiwana mahara.
«DesignLab Studio» ari nyanzvi dhizaini yekushandisa Izvo zvaunokwanisa kugadzira maalbubhu, mifananidzo, mifananidzo, makadhi ekukwazisa, zvinhu zvekushambadzira, memes uye zvimwe zvakawanda nenzira yakapusa uchishandisa "mamirioni emifananidzo inogadziriswa, girafu, mafonti uye matemplate". Uye zvakare, ine matani ekugadzirisa maturusi kuitira kuti ugone kugadzira zvese zvaunogona kufungidzira.
Iko kunyorera kwave kurodha mahara, asi kana iwe uchida kutora mukana kune ese mashandiro ayo uye maficha, iwe uchafanirwa kutarisa kunze pamutengo we € 4,99 pamwedzi kana € 19,99 pagore.
DesignLab - Dhizaini Yakagadzirwavakasununguka
Speedball 2 Shanduko
Uye sezvo isu tiri pamikova yeweekend tinoguma nemutambo. Mune ino kesi iri «Speedball 2 Evolution», mutambo uyo uri sanganisa pakati penhabvu neHockey, ine chaizvo kasino kubata uye yakawanda, yakawanda yekumhanyisa.
Unogona kutamba uchitora mukana weiyo gyroscope nekurerekera yako iPhone uyezve neiyo chaiyo joystick kuti ufare kuburikidza gumi nemaviri ematanho emunhu, maitiro evazhinji uye kusvika kumatimu makumi maviri nemasere kusarudza kubva.
"Speedball 2 Evolution" ine mutengo wenguva dzose we € 2,29 asi ikozvino unogona kuiwana chete € 1,09.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Kunakidzwa, kutora mifananidzo uye kugadzirwa, kwanhasi madhiri paApp Store
Kunakidzwa kwazvo kunyorera, kunyanya ini ndinowanzo farira kutora mifananidzo. Kutenda nekutumira, kwaziso.
Carpool Karaoke episode neLinkin Park kuti iburitswe zvakananga paFacebook
Ino iOS 11.0.2 inogadzirisa matambudziko ebhatiri?